Kim Jong-un oo diyaar u ah inuu wadahadal la yeesho Maraykanka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Kim Jong-un oo diyaar u ah inuu wadahadal la yeesho Maraykanka
Kim Jong-un oo diyaar u ah inuu wadahadal la yeesho Maraykanka
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wadahadal la yeesho Madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Joe Biden.
Kim ayaa markii ugu horeysay si toos ah uga hadlo maamulka madaxweyne Joe Biden.
Waqooyiga Kuuriya waxay horey u diidday dadaallada dowladda cusub ee Maraykanka ay ku doonayso inay ku dhisto xiriir diblomaasiyadeed.
Maraykanka wuxuu ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasusho hubkeeda Niyukleerka.
Laakiin Pyongyang si isdaba joog ah ayey u diidday, Golaha Amniga ee Qaramada Midoobayna wuxuu cunaqabateyn adag oo xagga dhaqaalaha ah ku soo rogay gobolka Bariga Aasiya ee tijaabooyay Niyukleerka.
Mr Kim wuxuu hadalkiisii ​​ugu dambeeyay ka sheegay shirkii hogaamiyaasha sarsare oo todobaadkan ka bilowday caasimada Pyongyang.
Waxa uu sheegay inay u baahan yihiin gaar ahaan inay si buuxda ugu diyaar garoobaan iska hor imaad si loo ilaaliyo sharafta dawladnimadeena iyo danaheeda ku aaddan horumarinta madaxbannaan iyo sidoo kale inay damaanad qaadaan jawi nabdoon iyo nabadgelyada Kuuriyada Waqooyi, sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ee KCNA.
Waxa kale oo uu sheegay in Kuuriyada Woqooyi ay si dhakhso leh oo dhakhso leh uga falcelin doonto wax kasta oo soo kordha isla markaana ay xoogga saari doonto dadaallada ay kula wareegeyso gacan ku haynta xaaladda ee gacanka Kuuriya.
Wararkan ​​ugu dambeeyay waxay yimaadeen maalmo kadib markii uu si rasmi ah u qiray in Kuuriyada Waqooyi ay soo food saartay walaac la xiriira cunno yari.
Horraantii toddobaadkan hoggaamiyeyaasha dalalka G7, oo uu ka mid yahay Mr Biden, ayaa ugu yeeray Kuuriyada Waqooyi inay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha oo ay dib u bilowdo wadahadalka
Kim Jong-un oo diyaar u ah inuu wadahadal la yeesho Maraykanka was last modified: June 19th, 2021 by Admin
Akhriso+Sawiro:-Ra’iisul Wasaare Khayre oo Tababar u Furay Ciidamada Xoogga Ee Dhawaan Laga Qaremeeyay Deegaannada Galmudug